Ny Apple iPad: manavao na maty | Vaovao IPhone
Dimy taona ny iPad, saingy tsingerintaona mangidy. Ny fidirana mamirapiratra dia narahin'ny fianjerana nahagaga toy izao, miaraka amin'ireo tarehimarika fivarotana izay ambany lavitra noho ireo izay takelaka fanaonay. Raha mihamatanjaka ny iPhone ary mamaky ny firaketana rehetra momba ny varotra dia toa lany ny iPad. Tapitra ve ny vanim-potoana taorian'ny PC? Ny fiandohan'ny faran'ny iPad ve? Tsy misy tsara noho ny famakafakana ireo angon-drakitra ahafahana manovo ny fehinkevitra ananantsika.
1 Ny fidinan'ny varotra sy ny vidin'ny fivarotana antonony
2 Ny iPad dia havaozina kely kokoa
3 Mety ho ny iPad Pro no vahaolana
Ny fidinan'ny varotra sy ny vidin'ny fivarotana antonony
Ny tarehimarika natolotry ny Apple ny talata lasa teo dia miharihary izao: ny iPad dia mbola milatsaka malalaka ary tsy ny ampaha-matanjaka indrindra amin'ny varotra Apple aza no nahavita nanova ny fironana: 21,4 tapitrisa iPads amidy. Midika izany fa efa izy ireo ampahefatra efatra nisesy miaraka amin'ny fihenan'ny varotra raha ampitahaina amin'ny vanim-potoana mitovy tamin'ny taona lasa. Ary mitranga izany na eo aza ny fananana katalaogin'ny fitaovana sy ny vidiny lehibe indrindra amin'ny tantarany.
Ny iPad mora indrindra dia 239 €, vidiny mihomehy raha oharina amin'ny vidin'ny maodely iPad amin'ny vanim-potoana volamena, ka tsy afaka milaza isika fa sakana amin'ny fividianana ny vidiny. Rehefa miakatra ny vidin'ny iPhone isan-taona, ary manohy mamaky firaketana isan-taona.
Betsaka koa no milaza fa ny olana amin'ny iPad dia ny iPhone 6 Plus izay mitovy loatra ary ny olona efa misafidy ny Apple phablet fa tsy ny iPad. Tokony hisy fiantraikany izany, raha ny marina dia ny tenako no nanamarina izany, satria manana ny iPhone 6 Plus aho dia saika tsy mikasika ireo iPad-ko mihitsy. Saingy tsy ampy ny antony fianjerana lehibe toy izany, satria ny vidin'ny fivarotana iPad dia nidina, mihoatra ny € 350 isaky ny singa amidy. Midika izany fa maro ny olona misafidy ny iPad Mini, mora kokoa noho ny zokiny lehibe, ny iPad Air, ary manana efijery kely kokoa.
Ny iPad dia havaozina kely kokoa
Ny olan'i Apple dia maharitra ela loatra ny iPad. Raha ny tiako holazaina dia hoe lava loatra dia midika hoe "lava loatra amin'izay tadiavin'i Apple." Ary ny tena meloka dia Apple, mazava ho azy. Tsy noho izy io mamokatra vokatra manana kalitao, izay mitondra tena toy ny tompon-daka ny batterie na eo aza ny fandehan'ny fotoana, ary miaraka amin'ny fampisehoana izay mitazona ambaratonga tsara na eo aza ny fandehan'ny fotoana. Izao dia rehefa mitsangana avy eo amin'ny sezany ireo mpamaky miaraka amin'ny iPad 2 ary manipy ny iPad eo an-dohako. Eny, iPad 2 dia natomboka efa-taona lasa izay, mandrakizay rehefa miresaka momba ny haitao isika, na dia mazava ho azy aza, raha nisy nividy azy herintaona lasa izay, dia tsy hampiasaina loatra ity fanazavana ity.
Ny tiana holazaina dia hoe na iza na iza mividy iPad dia tsy mila manavao azy isan-taona, tsy isaky ny roa taona. Ny iPad 3 ahy dia efa ho telo taona ary mbola tsy nandinika ny fanavaozana azy aho, ary "geek" Apple izay te hanana ny farany misy ny farany.
Vao mainka niharatsy izany tamin'ny famoahana ny iPhone 6 sy 6 Plus vaovao. Smartphone roa lehibe kokoa izay ahafahan'ny mpampiasa miaina akaiky kokoa ny atolotry ny iPad, angamba mety tsara kokoa amin'ny lafiny sasany, satria maivana sy mora kokoa ny mitazona amin'ny tanana iray. Ity misy ny olana Apple iPad lehibe: Inona no atolotry ny iPad ahy fa tsy omen'ny iPhone 6 na 6 Plus?
Ny iPad dia fitaovana nentim-paharazana handany atiny: mijery sarimihetsika, fizahana tranonkala, lalao ... fiasan'ny iPhones vaovao saika mitovy amin'ny Apple tablet. Apple dia tsy maintsy miverina mieritreritra ny iPad fa mila mijanona tsy ho fitaovana handaniana izy ary ho lasa fitaovana hamokarana.
Mety ho ny iPad Pro no vahaolana
Betsaka ny zavatra voalaza momba ny iPad Pro, na dia kely aza no fantatsika momba azy, saingy ankehitriny dia toa izy io no hoho farany nirehitra izay azon'i Apple mba hamonjy ny takelaka misy azy amin'ny fandoroana azy. Tsy ampy ny iPad lehibe kokoaTokony ho iPad tsara kokoa izy, ilaina kokoa ho an'ny sehatry ny matihanina, ary ilaina kokoa ho an'ny sehatry ny trano, izay tena afaka mieritreritra ny handao ny solosainany hivadika hampiasa iPad.
Ilay safiotra be mpanely be resabe eo amin'ny iOS sy OS X dia heveriko fa tsy ho ela dia ho tonga izy io, saingy io no lalana nomarihin'i Microsoft ary ilay antenaina fa ho tanjon'i Apple ihany koa. Takelaka mamela ahy hahomby amin'ny fomba mahomby, nefa ahazoana aina ihany koa ny mihinana atiny. Angamba ny fampifangaroana iOS-OS X dia zavatra iray tena lavitra amin'izao fotoana izao, fa ny iOS iray tena hafa noho ilay ananantsika amin'izao fotoana izao amin'ny iPad izay tena mampiavaka azy amin'ny iPhone dia mety (na ny tena marina, tokony) ho tena zava-misy atsy ho atsy. Tokony hiavaka amin'ny zandriny lahy ny iPad, miaraka amin'ireo fiasa manokana izay manome isa fanampiny fanampiny izay mahatonga antsika tompona iPad amin'izao fotoana izao nanangana ny fanovana. Ankoatr'izay, mahatonga ny tompona iPhone amin'izao fotoana izao te-hanana iPad satria ny écran no tsy mampiavaka azy ireo.
Amin'ny 24 Febroary dia afaka manana ny vahaolana tadiavin'i Apple isika. Io andro io, araka ny tsaho, rehefa hasehon'i Apple amintsika ny Apple Watch (indray), ny iPad Pro vaovao ary ny MacBook Air 12-inch vaovao. Hiandry ela be izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Ny Apple iPad: manavao na maty
Rafeljb dia hoy izy:
Heveriko manokana fa ilay rindranasa, ary amin'ilay vaovao haseho amin'ity taona ity, dia handray dingana vaovao, tsy fantatro raha ho iPad Pro izy io, saingy misy ny fiovana, ankehitriny dia toa miaraka amin'ny 6plus ny ny fampiasana ny iPad dia kely kokoa, araka ny nanamarihanao ny lahatsoratra ny iPad dia ny mahita ny atiny ary kely hamokarana.
Ny iPad air 2 dia efa mitondra vidiny hafa noho ny 6plus, izay toa mahomby kokoa ary natao hamokarana.
Miaraka amin'ny iPad izay haseho amin'ity taona ity, azo antoka fa ho tonga ny apps ibm, izay miaraka amin'ny automatisation birao izay efa eo no ho fiandohan'ny iPad hamokarana atiny.
Azonao atao ny manomana lahatsoratra vitsivitsy natokana ho an'ny fampiharana, na mandeha ho azy any amin'ny birao izy ireo, hanovana horonantsary sy sary, azo antoka fa ho gaga izahay amin'ny zavatra misy sy ny hatsaran'izy ireo manomboka.
Valiny ho an'i Rafeljb
Ipad mandrakizay dia hoy izy:
Inona tsy misy dikany, iphone plus izay tsy mahasolo ny ipad mini-ko.
Tsotra satria ny masoko dia feno fankasitrahana foana ny efijery lehibe kokoa, dia tsotra io.
Tsy misy ipad intsony amidy tsotra satria maharitra kokoa noho ny finday tsotra izy ireo.
Manana ipad mini 1gen aho. ary tsy mieritreritra ny hanova azy eto aho hatramin'ny taona maro fa an-taonany maro. Nanova ny findaiko in-8 aho
Mamaly an'i Ipad mandrakizay
Leibniz dia hoy izy:
Ny haben'ny efijery dia singa iray hamaritana raha afaka manolo ny iPad ny iPhone lehibe, saingy misy antony roa manakana ahy amin'izao fotoana izao ary tsy misy "fanamboarana". Ny fampiharana fotsiny ho an'ny boky ipad sy multitouch dia ampiasaiko roa, izay ho ahy dia tsy azo atao mihitsy raha tsy misy iPad amin'izao fotoana izao.
Valiny tamin'i Leibniz
Hydra, fampiharana ho an'ireo izay te naka sary amin'ny HDR
Ny torolàlana farany momba ny fampiasana Apple Pay